Waxqabadka ugu badan ee Mac: Hagaha saxda ah | Waxaan ka socdaa mac
Waxqabadka ugu badan ee Mac: Hagaha saxda ah
Juan Colilla | | Kombiyuutarada Mac, Tababarada
Mac-yada ayaa kor u kacaya, dad aad u tiro badan ayaa iibsanaya qaar badan oo ka mid ahna waxay ku sameeyaan gacan labaad, Macs laga soo bilaabo sannadihii u dhexeeyay 2008 iyo 2012, kombuyuutarro xitaa maanta bixin kara dagaal badan, hase yeeshee tan waa inaad siisaa xoogaa riixis ah.
Tilmaamahan waxaan ku tusi doonaa waxyaabo kala duwan, waxaad arki doontaa dhammaan xulashooyinka aad u baahan tahay cusbooneysii Mac-gaagii hore si qalabka ay u raaci karaan softiweerka mana laha waxba kuma hinaaso moodooyinka ugu dambeeyaWaxaan arki doonnaa talooyin ku saabsan sida loo ilaaliyo qalabka si Mac-keena uu u haysto nolol aad u dheer oo waxtar leh xitaa waxaan dib u eegi doonnaa barnaamijyada waaweyn ee kor u qaadaya isticmaalka kombuyuutarkaaga si aad u xaddiddo xitaa aadan ka shakin.
1 Tilmaamahan yaa loogu talagalay?
2 Aynu taabanno gudaha, maxaan samayn karnaa?
2.1 Mac-gaagu ma gaabis yahay? Aynu isku dayno inaan rakibno SSD
2.1.1 1. Ku beddel HDD-ga SSD:
2.1.2 2. Adeegso SSHD
2.1.3 1. Ku rakibida SSD-ka webiga weyn iyo HDD-ga ku jira Data Doubler waxaan sameyn karnaa Fusion Drive-ka guriga lagu sameeyo.
2.1.4 2. Mister Spock xawaaraha foorarsiga, RAID 0
2.1.5 3. Mashiinka Waqtiga? Dhakhtarka Aan guriga joogin hadda, RAID 1.
2.2 Miyuu Mac-gu si fudud u liqaa? Waqti kor loogu qaado RAM-ka
2.3 Haddii aad tahay gamer oo aad leedahay MacBook Pro, maxaad ugu rogi weyday kombuyuutar desktop ah?
3 Software si loo hagaajiyo
3.2 2. Qihoo 360 Amniga
4 Cusbooneysii software
4.2 2. Xakamaynta Taageerayaasha Macs
4.4 4. dhaji
4.5 5. Qarsoon 2
4.6 6. Isgoysyada
Tilmaamahan yaa loogu talagalay?
Tilmaamahan waxaa loogu talagalay dhammaan kuwa haysta Mac.Haddii aad leedahay Mac duug ah waxaad arki kartaa hage ka kooban qaybo kuu oggolaanaya nolol cusub sii kooxdaada, Haddii aad ka mid tahay kuwa haysta Mac aan duug ahayn laakiin aan ahayn moodelkii ugu dambeeyay, hubaal waxaad ka heli doontaa qayb ka dhigi karta kombuyuutarkaaga heerka ugu cusub iyo softiweerka soo saari doona kan ugu fiican kombuyuutarkaaga , iyo ugu dambeyntii, haddii aad tahay Mulkiilayaasha sharafta leh ee jiilka soo socda ee Macs waxay heli doonaan qaybo kuu oggolaanaya inaad ballaadhiso ilahaaga iyo, wixii ka sarreeya, softiweer oo hagaajin doona khibradaada isticmaale.
Gaaban, Tilmaamahan waxaa loogu talagalay qof kasta oo leh Mac (Hadday la jaanqaadi karto OS X El Capitan aad ayey ugafiican tahay).
Aynu taabanno gudaha, maxaan samayn karnaa?
Wixii hore oo aan duug ahayn, Macs (Faa'iido, iMacs, Minis, iyo MacBooks) waxay u oggolaanayaan waxoogaa casriyayn ah, guud ahaan waxyaabaha ugu fudud ee la cusbooneysiin karo waa darawalada kaydinta, modullada RAM, darawallada indhaha, iyo wax kale oo yar. qaybaha OS X oo nolol cusub siin kara kooxdeena kharash garaynta wax aad ugayar kharashka koox cusub.
Mac-gaagu ma gaabis yahay? Aynu isku dayno inaan rakibno SSD
Haddii Mac-gaagu qaato waqti dheer si uu u bilaabo nidaamka iyo furitaanka codsiyada (waan ku fahmay, sugitaanku weligiis wuu qaadanayaa), waxaa la joogaa waqtigii la beddeli lahaa wadistaada caadiga ah ee adag (oo loo yaqaan HDD) SSD cusub, halkan ka daawo, iyadoo kuxiran baahiyahayaga iyo kooxdayaduba waxay gaari karaan mid ama go'aan kale.
Haddii kumbuyuutarkaagu kaliya taageerayo aaladda SATA (tani waxay muujineysaa in aysan lahayn aqrin CD ama aadan rabin inaad ka saarto) waxaan heysanaa laba ikhtiyaar:
1. Ku beddel HDD-ga SSD:
Ventajas: Waxaan heli doonnaa waxqabadka ugu sarreeya uguna mahadcelinta xawaaraha cusub, xaaladdan waxaan kugula talinayaa SSD ka Kombuyuutaro kale oo adduunka ah haddii aad tahay isticmaale baaraya internetka, horumariyeyaasha ama naqshadeeyayaasha garaafka, ama Corsair SSD haddii aad isticmaaleyaal aad ugu heellan tahay ciyaaraha fiidiyowga ama tafatirka fiidiyowga iyo sawir qaadista.
Iyadoo kooxdaada SSD ah wuxuu bilaaban doonaa ilbiriqsiyo gudahood waxayna furi doontaa codsiyo intaadan ogaanin, waxay kaloo soo rari doontaa mashaariic, shaashadda ciyaarta fiidiyowga waxayna ku wareejin doontaa feylasha xawaare layaableh oo gaaraya 6Gb / s, shaki la’aan faahfaahintani waxay kaa dhigeysaa inaad aamminsan tahay inaad haysato kombuyuutar cusub.
Dhibaatooyinka: Awoodda ballaaran ee SSD waxay noqon kartaa “qaali”, haddii aad rabto mid ka mid ah 240GB waxaad ka heli kartaa qiimayaasha u dhexeeya € 100 iyo € 140 (illaa inta aad mid fiican rabto), iyo Waxaan kugula talinayaa Corsair iyo OWC maxaa yeelay waa noocyo la caddeeyay inay la kulmayaan heerarka ugu tayada sarreeya. Haddii aad qaadatid waxyaabo jaban, inkasta oo aad isku ballan qaadday, waxaad ka heli kartaa SSDs gaadhaya 3GB / s ama leh nolol aad u gaaban oo faa'iido leh ama dhibaatooyin badan siinaya. Tani waa qodob aad muhiim u ah: waxaad bixiso maanta waxaad badbaadin doontaa berri.
Tilmaamaha riixaya halkan.
2. Adeegso SSHD
Ventajas: Disk-gaan wuxuu u shaqeeyaa si lamid ah kan Fusion Drive, waa HDD caadi ah oo leh qadar yar oo NAND Flash Memory gudaheeda ah meesha nidaamka (OS) ku keydsan yahay, saxamadaan waxaan kuheleynaa midka ugu fiican SSD (xawaare) iyo ugu fiican ee HDD (awoodda) qiimaha oo noqon kara € 100 oo loogu talagalay 1TB kaydinta.
Kabaha ayaa noqon doona sida ugu dhakhsaha badanama in leh SSD iyo furitaanka codsiyada ayaa waxyar ka dheereyn doona HDD.
Dhibaatooyinka: Laga soo bilaabo NAND Flash waxaan ka heli doonaa 8GB, inta soo hartay waa HDD saafi ah, markaa waa ikhtiyaar in la tixgeliyo (aad uga fiican HDD) laakiin waxay ka hooseysaa waxqabadka SSD bixin karo inaad haysato qol badan oo aad ku socodsiiso wax walba xawaare buuxa.
Tilmaamaha: Isla sidii geeddi-socodkii hore.
Haddii kumbuyuutarkaagu leeyahay unug SuperDrive ah oo aadan adeegsan, waxaad iibsan kartaa xirmo SSD + Data Doubler ah, feker ahaanteyda ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican.
1. Ku rakibida SSD-ka webiga weyn iyo HDD-ga ku jira Data Doubler waxaan sameyn karnaa Fusion Drive-ka guriga lagu sameeyo.
Ventajas: Guriga joogitaankiisa waxaan isku qasan doonaa 2 nidaam oo keyd ah, tani waxay na siineysaa suurtagalnimada inaan dooranno meeqa meelood ayaan ku rabnaa mid walbaSidan oo kale, waxaan u dooran karnaa 60GB SSD midka ugu weyn iyo 2TB HDD sida midka labaad, ama haddii aan aaminsanahay in 60GB ay ku yar yihiin SSD-ka iyo 2TB badan oo HDD ah, waxaan dooran karnaa isku darka aan jecel nahay badankood.
Dhibaatooyinka: Kharashaadku way tarmayaan, SSD-yada leh awood weyn iyo waxqabad wanaagsan waxay u baahan yihiin maalgashi aad u tiro badan (in kasta oo mid ka mid ah 60GB raqiis noqon karo), waana inaad sidoo kale iibso adabtarada (oo ay ku iibiyaan OWC oo ku yimaada xirmooyin ay la socdaan sicir-dhimisyadooda SSDs), waana inaad ku qasabtaa saar qalabka CD-gaHaddii aan rabno inaan adeegsanno, waa inaan ku bixinnaa illaa € 20 adabtarada dibedda ah oo noo oggolaaneysa inaan ku xirno USB-ga.
Halkan guji oo xulo kooxdaada tilmaamaha.
Tilmaamaha abuurista Fusion Drive-ka guriga lagu sameeyo:
Diyaarinta: Marka ugu horeysa waa inaan abuurnaa OS X rakibida USB ee qaabkeedii ugu dambeeyay. Si aad u soo dejiso, riix ku hel 'AppStore' badhanka «Alt» oo la riixay, waan awoodnaa isticmaal DiskMakerX si aad u abuurto USB-ga, waxaa lagugula talinayaa inaad nuqul ka sameysato Mashiinka Waqtiga si aysan u lumin xogta maadaama aan qaabeyneyno labada disk.
Mar haddii aan haysanno Mac-ka oo dansan oo saxammada lagu rakibay goobahooda, waxaan daarnaa Mac-ka oo aan qabannaa badhanka «Alt» illaa bilowga xuluhu ka soo muuqdo, halkaas ayaannu ka xulannaa USB-ga wax lagu rakibo oo aan sugno inta ay ku shubanayso
Kahor intaadan rakibin, waxaan aadeynaa qeybta "Utilities" oo waxaan ka fureynaa "Terminal".
Terminalka waxaan ku qornay xeerarkan soo socda:
1. liiska diskutil (Halkan waa inaan raadino aqoonsiyeyaasha SSD iyo HDD ee lagu soo bandhigi doono qaabka "/ dev / disk1").
2. diskutil cs waxay abuuraan Fusion diskX diskY (In diskX) waa inaan galnaa aqoonsi ee unugga SSD iyo diskY in HDD ah.
3. diskutil cs liiska (Waxay soo bandhigi doontaa macluumaad ku saabsan Fusion Drive-ka la abuuray, waa inaan ogaano aqoonsiga u muuqda kooxda mugga macquulka ah)
4. diskutil cs abuurVolume (aqoonsi horay loo tilmaamay) jhfs + Fusion 100%
Tallaabooyinkan waa inaan horeyba u helnay Fusion Drive-ka la abuuray. Isla marka hawshu dhammaato, u tag Disk Utility si aad u hubiso oo aad u sii wadato rakibidda nidaamka cutubkan, waad ka soo kaban kartaa nuqulka Waqtiga Mashiinka ee ku jira iyada oo aan wax dhibaato ah lahayn.
2. Mister Spock xawaaraha foorarsiga, RAID 0
Ventajas: Nidaamka RAID 0 wuxuu isku daraa labada disk oo wuu qoraa oo wuxuu u akhriyaa xogta si isdaba joog ah labadaba isla waqtigaas, tani waxay muujineysaa inaan arki doonno sida awoodda iyo xawaaraha labada saxan ayaa lagu daray noo ogolaanaya inaan gaarno xawaaraha aqrinta / qorista ee gaaraya ilaa 1GB / s (yaan lagu jahwareerin Gb, 2GB waxay u dhigantaa 1MB, 1024Gb waxay u dhigantaa 12MB), xawaarekaan ayaa anfacaya haddii aan badanaa la shaqeyno faylasha mugga weyn.
Dhibaatooyinka: Si aad u isticmaasho RAID 0, waxaad u baahan tahay laba aaladood oo isku mid ah, taas oo ah, isku awood iyo xawaare, sidaa darteed sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaasho isku nooc iyo isku nooc.
Laakiin halkaas kuma eka, ma marti qaadi karno HDD iyo SSD, waa inaan mid ka dooro labada nidaam midkoodna isticmaal, haddii aan isticmaalno 2 HDDs waxaan gaari doonnaa xawaare ku dhow 160MB / s halka 2 OWC SSDs aan ku guuleysan lahayn 1.200MB / s oo ah aqrin / qorid qiyaastii, tani waxay sidoo kale meteleysaa maalgelin aad u tiro badan haddii aan dooneyno inaan adeegsanno SSD-yada (waxa wanaagsan ayaa ah in awoodeeda ay ku darsan laheyd, marka hadii aan rabno inaan yeelano 240GB waa inaan iibsanaa laba SSD oo midkiiba yahay 120GB).
Sida haddii aysan taasi ku filneyn, adeegsiga 2 aalad RAID 0 ayaa naga dhigeysa inaan yeelano laba jeer fursad ay ku lumiso xogta, taasi waa, xogta ayaa la keydiyaa oo loo qaybiyaa labada qalabba, haddii midkood ku guuldareysto waxaa noo haray kala bar xogtayada, laakiin ma ahan nuska laga yaabo inuu u muuqdo, laga yaabee fiidiyowga kahor inuu si fiican u sharxayo.
Waxaan rakibnaa laba saxan oo isku nooc ah, karti iyo xawaare.
Waxaan ka bilaabaynaa Mac-ka OS X rakibida USB.
Waxaan fureynaa Terminal oo waxaan galnaa tan:
«diskutil appleRAID samee xariiqa [Magaca aan dooneyno inaan u bixino RAID 0] JHFS + disk0 disk1«
3. Mashiinka Waqtiga? Dhakhtarka Aan guriga joogin hadda, RAID 1.
Ventajas: Nidaamka RAID 1 wuxuu ka kooban yahay iyadoo la adeegsanayo laba aaladood oo keyd ah oo nidaamku isku mid ka soo guurin doono wax la mid ah, taas oo ah, feyl ayaa la koobiyeyn doonaa 1 jeer disk kasta oo jira, taasna waxay tusineysaa in haddii hal disk uu dhinto, waxaan haynaa diskka kale oo leh dhammaan xogta waana beddeli karnaa ama hagaajin karnaa diskiga dhaawacmay si nidaamku u nuquro dhammaan xogta laga soo qaado diskiga oo xaaladdiisu wanaagsan tahay. Tan waxaan ku hubineynaa inaanan lumin wax faylal ah tan iyo markii aan yareynay kala bar fursadaha uu nidaamkayagu ku guuldareysto (way adkaan laheyd labada qalab inay ku fashilmaan waqti isku mid ah). Ka taxaddar, tani kaama ilaalinayso fayrasyada iyo malwareyaasha kale: haddii khayaanada qaarkood ay ku dhacaan kombuyuutarkayaga waxay qaadsiin lahayd labada aalado isku marSidaa darteed, waa ikhtiyaar loogu talagalay kuwa ugu xiisaha badan.
Dhibaatooyinka: Halkee ayaan ka bilaabayaa? Kaama ilaalinayo infekshanka furin, kumana daro awoodo ama xawaare, markaa hadii aan haysan lahayn 2 SSDs oo ah 240GB oo ah 560MB / s kombiyuutarku wuxuu adeegsan karaa 240GB xawaare dhan 560MB / s, tani waxay sheegaysaa a kharash aan loo baahnayn adiga oo laba jibbaaraya isla faa'iidooyinka (marka laga reebo kordhinta amniga xogteena).
Isla talaabooyinka 1 iyo 2 ee RAID 0.
«diskutil appleRAID wuxuu abuuraa muraayad [Magaca aan dooneyno inaan u bixino RAID 1] JHFS + disk0 disk1«
DHEERAAD AH: Xirmada OWC waxaan ku iibsan karnaa SSD oo leh adabtarada 'SATA adapter', adabtaradan ayaa noo oggolaan doonta inaan rakibno wixii qalab ah oo ah SATA disk oo leh 2-inji iyo ku xir iyada oo loo marayo USB 3.0Sidaa darteed, waxaan u isticmaali karnaa SSHD sida diskka ugu weyn ama FusionDrive oo lagu abuuray Data Doubler oo aan galiyo HDD caadi ah adabtaradan aan u xilsaari karno sida Mashiinka Waqtiga, oo si otomaatig ah u abuuraya nuqul nuqul OS X ah (ikhtiyaar fiican haddii aad leedahay xaddi dhaaf ah 2 inji HDD guri kasta).
Wadista Iskuxirka OWC
Miyuu Mac-gu si fudud u liqaa? Waqti kor loogu qaado RAM-ka
Haddii Mac-du ku liqdo isla marka aad furto dhowr codsi, waxaa laga yaabaa inay noqoto waqtigii lagu casriyeyn lahaa RAM-ka. Xusuustani waa qayb muhiim ah oo nidaamka ka mid ah maadaama aan haysan wax ku filan ama SSD si wanaagsan u maamuli karto hawlo fara badan waana lagu xaddidi lahaa.
Sidii kiiskii hore, halkan waxaan kaliya kugula talinayaa laba soosaara (mid walboo naqshadeeya alaabtooda iyadoo ku saleysan dadweynaha loo jiheeyay)
Corsair loogu talagalay cayaartoyda, naqshadeeyayaasha garaafka iyo sawir qaadista iyo fiidiyowga.
OWC adeegsadayaasha baaraya internetka, adeegsanaya xafiiska otomaatiga ama horumariyayaal.
Halkan xulashooyinka ayaa aad u yar, ma jiraan tiro aad u badan sidii qaybtii hore. Aan aragno markaa xaddiga RAM-ka ee aan la sii wadi karin maanta, kuwee ayaa lagu talinayaa iyo sababta:
Haddii aad haysato 2GB RAM: Dhimasho, haddii Mac-gaagu kuu oggolaado, waa inaad isla markiiba beddelataa RAM-ka, waxa lagu taliyay si aanad weligaa u dareemin maqnaanshaha RAM waa inaad rakibto 8GB, laakiin haddii Mac-gaagu keliya u oggolaado 4, rakibo 4, hagaajinta hubaal waad ogaan doontaa, labanlaabidda xaddiga RAM waxaad arki doontaa sida ay barnaamijyadu u wada socdaan iyada oo aan nidaamka la liqin iyo in kasta oo ay jiraan dhawr barnaamij oo furan haddana ma waayi doontid xakamaynta nidaamka.
Haddii aad haysato 4GB: Wanaagsan laakiin si siman u xun, waxaan ku jirnaa xaaladdii sidii hore, 8GB waa saldhigga aad ka bilaabi laheyd, haddii Mac-kaaga kuu oggolaado, rakib 8GB oo RAM ah, waad ordi kartaa inta barnaamij ee aad rabto ee aadan lumin doonin xakamaynta nidaamka dartiis.
Sidoo kale u maleyso in Macs badani la yimaadaan GPU-yada isku dhafan, kaararkaas sawirada ah waxay isticmaalaan xusuusta la wadaago, si kale haddii loo dhigo, Xusuusta RAM waa la keydiyay Iyaga, annagoo og tan waxaan u kala bixi karnaa laba shay; Midda hore waxay tahay haddii aan heysano 4GB oo RAM ah iyo GPU isku dhafan, waxaa hubaal ah inaan nooga hari doonno 3GB, tan labaadna waa in la wadaago, xusuusta fiidiyowga waa la kordhin karaa, taasoo aad ugu dhowdahay haddii aad RAM kordhiso GPU sidoo kale wuu keydsan yahay xusuusta fiidiyowga sare, taas oo hubaal keeni doonta horumarin ku saabsan howlahaaga ciyaaraha fiidiyowga, fiidiyowyada iyo sawirrada.
Haddii aad haysato 8GB: Hagaag, waa xaddiga RAM-ka aasaasiga ah ee ay tahay inuu kumbiyuutar kastaa haysto, waa ku filan tahay inuu ciyaaro, sidaa darteed GPU-gu ma ahan wax isku dhac ah marka amaahda amaahda iyo si barnaamijyadu u shaqeeyaan iyadoon nidaamka la liqin
Iyada oo ay taasi jirto, waa la sii wanaajin karaa, haddii aad jeclaan lahayd inaad wax ka beddesho sawirrada ama fiidiyowyada waa inaad tixgelisaa inaad u cusbooneysiiso 12 ama 16 GB.
Haddii aad leedahay 12 ama 16GB: Xaddiga saxda ah ee xusuusta, oo leh qaddarkan nidaamku weligiis ma liqi doono, liddi ku ah, isagoo haysta RAM aad u badan oo la heli karo waxay u badan tahay in OS X uu u isticmaalo qayb ka mid ah abuuro kayd fayl ah, tani waxay sababi doontaa feylasha aad loo isticmaalo in loo guuriyo RAM si marka xigta ee aan u furno furitaanku uu u ahaado mid deg deg ah, iyo furitaanka dhamaan codsiyada ma awoodi doono inaanu wada cunno xusuusta oo dhan, waxaan haystaa 16GB iyo MacBookkeyga waligood ma cunin 10GB dheeraad ah caawimaad la'aan.
Caawimaad noocee ah? Waad fikireysaa ... Hagaag tani waa tan ugu fiican, haysashada RAM aad u badan waxaan qeyb uga dhigi karnaa qeyb ka mid ah tijaabooyinkayaga, tusaale ahaan, adoo adeegsanaya Isbarbar dhigyo waxaan ku qori karnaa 6GB RAM ah Windows si OS X iyo Windows labaduba ay u socdaan si qumman oo isku mar u socdaan, ama aan u isticmaali karno barnaamijka iRamDisk si aad u sameysid saxammo leh RAM (RAM-ka waa la tirtiraa mar kasta oo nidaamka la xiro, marka waa inaan ka taxaddarnaa waxa aan halkaa ku kaydinayno), cajaladahaas waxaan xitaa ku keydin karnaa keydka Safari, helitaanka xogtaan oo ka badan 2.500MB / s.
Haddii aad tahay gamer oo aad leedahay MacBook Pro, maxaad ugu rogi weyday kombuyuutar desktop ah?
MacBook Pros waxay isticmaalaan qalab tayo sare leh iyo xitaa moodooyinka 2011 iyo 2012 maanta wali wax badan ayaa laga sheegayaa, waa sababtaas darteed waxaan sameyn karnaa dhowr maalgashi oo aan guri ku yeelan karno guriga. xarunta ciyaarta / xarunta warbaahinta kaas oo aan ugu adeegsanayno barnaamijkayaga 'MacBook Pro' sidii xarun neerfayaasha, aalad na siisa raaxada ugu weyn guriga iyo dibaddaba.
Thunderbolt ilaa fiilada HDMI
Software si loo hagaajiyo
Haatan waxaa imanaya qaybta noo wada adeegaysa, wax kasta oo Mac ah oo aan haysanno, liis yar oo barnaamijyo ah oo ilaalin doona khibradeenna OS X qaab ahaan:
Barnaamijkan yar waxaan ku dhaqaajin karnaa / joojin karnaa howlaha nidaamka qarsoon, kumbuyuutarka sifiican ugu habeyn iyadoo la adeegsanayo qoraallo heersare ah oo la jaan qaadaya goobaha ogolaanaya, tusaale ahaan, in la joojiyo dhawaaqa bilowga ah ee xanaaqa ee Mac.
2. Qihoo 360 Amniga
Nidaamka OS X waa mid aad amaan u ah, taasi shaki kuma jiro, gaar ahaan haddii aan ku xaddidnay rakibidda barnaamijyada "Mac AppStore" oo keliya, haa, tani macnaheedu maahan inaynaan ka heli karin Malware khadka tooska ah, halkan iftiinka iyo bilaashka ah antivirus ayaa noo noqon doonta saaxiibkayaga ugu fiican, wuxuu ilaalin doonaa daalacashadayada Safari (ama biraawsar kasta oo aan u isticmaalno) a Shield Online waxayna hubin doontaa inaanan u fulin barnaamij kasta oo khatar ku ah nidaamkeena, waxaas oo dhan si aamusnaan ah oo aan ku kaceyn kheyraadkeena qaaliga ah.
Waxa kale oo ku jira hubiyaha qaabeynta halka waxaan si faahfaahsan u ogaan doonnaa qalabka qalabkeenna, maareeye codsi oo noo oggolaan doona in aan tirtirno iyo xitaa qashin nadiifiye oo xafidi doona keydkeena iyo meelaha kale ee muhiimka ah si looga fogaado in loogu tago kombiyuutar gaabis ah oo aan lahayn meel lagu keydiyo.
Aaladda aan u baahnayn inuu ka maqnaado Mac-geena, tan ugu fiican markay tahay maareynta cajaladeena, ayaa noo oggolaan doonta inaan tijaabooyin ku qaadno qalliinnadayada adag si aan u hubino xaaladdooda iyo caafimaadkooda, u aragno heerkulka iyo warbixinnada kala duwan, qoryahayaga muuqaal ahaan qaab ahaan, KU GUULEYSO OO WAQTI WAALID (Xaqiiqdii korantadan waa qasab haddii aad go'aansato inaad SSD ku dhigto Mac-gaaga, iyo in ka sii badan markay adeegsato habka asalka ah ee uu soo bandhigo OS X El Capitan).
Waxaan sidoo kale dhaqaajin karnaa ama joojin karnaa astaamaha sida "dareeraha dhaqdhaqaaqa lama filaanka ah", dareemayaal mas'uul ka ah joojinta disk-ka adag haddii ay dhacdo dhaqdhaqaaq si looga fogaado xogta luminta iyo in SSD la rakibo wax aan aheyn tamar lumis, maadaama SSD-yada aysan sameynin waxay leeyihiin qaybo farsamo gacmeed, sidaa darteed dhib kuma qabato dhibaatadan.
Waxa kale oo ku jira nidaam nadaafadeed oo muhiim ah oo goobta ku habboon iyo jaan-goyn noo oggolaanaysa inaan hubino xawaaraha akhris / qorid ee disk kasta.
Adeeg yar oo bilaash ah oo noo oggolaan doona inaan tirtirno codsi kasta oo aan la wadno dhammaan qashinka ay ka tagayaan oo ku faafay nidaamka.
Qolka nadiifinta ee bilaashka ah oo ay ku jiraan wax walba, nadiifinta khasnadaha, raadinta faylka nuqul, faylal badan oo daawadayaal ah, cut biary, nadiifiyaha luqadda, iyo yutiilitiya badan.
Gaaban, bedelka bilaashka ah ee Nadiifi My Mac.
Laakiin maahan barnaamijyada oo dhan inay u heellan yihiin nadiifinta iyo dayactirka qalabkeenna, waxaa jira yutiilitiyaal kale oo si isku mid ah ama xitaa ka sii muhiimsan u heellan hagaajinta khibradeenna Mac-da, waxaanan halkan ku soo ururinayaa dhawr ka mid ah:
KHATARSAN, Way igu adagtahay inaan ereyo ku sharaxo isbadalka aad la kulmi doonto Boom 2, waa faa iido ay kombiyuutarkaagu falanqeyn doono si uu u helo codkiisa soo saariddiisa, marka la ogaado wuxuu sameyn doonaa tijaabo yar iyo isbadal kaas (iyo I ' m ma kaftamayo) waxay beddeli doontaa khibrada codka ee qalabkaaga weligiis.
Adeegani wuxuu kuu abuuri doonaa astaan ​​astaan ​​u ah qalabkaaga oo ku saleysan maqalkiisa hooyo, horumarintana waxaa laga dareemayaa 0, mar haddii aad isku daydo dib ugama laabaneyso (Waxaan kugula talinayaa duubista kahor iyo kadib fiidiyowga, in kabadan waxkasta maxaa yeelay hadii aad tirtirto, waxaad lahaan doontaa dareenka ah in dadka kulahadlaya aysan sifiican ushaqeyneynin, laakiin waxba intaa kabadan, waxaad arki kartaa in waxa dhacay ay tahay in codka Mac-gaaga ah uu socdo mediocre illaa heer sare marka aad Boom 2 rakibtay).
Halkaas kuma joogsato, marka lagu daro hagaajinta codka Mac-gaaga waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad ku sii xoojiso barnaamijkeeda wax ku kordhiya Waad u rogi kartaa mugga xitaa ka sii sareeya!, oo ay kujiraan astaamo kaladuwan haddii ay dhacdo inaad ka mid tahay kuwa ugu baahida badan xagga dhawaaqa, sidoo kale waxaa ku jira saamaynta sida "Ambience" marka aysan jirin codad ku lug leh, iyadoo shaqadan la hawlgaliyay waxaan lahaan doonnaa cod aad u badan oo daboolan, shaqooyin kale waa "Fidelity High", "Spatial", "Night Mode" iyo "Pitch", waxay leedahay tijaabo 15 maalmood ah markaa waxaan ku tijaabin lahaa meeshaada oo waxaan u diyaarin lahaa faylalka liisanka, waan hubaa inaadan awood u yeesho inaad aragto Mac-gaaga markale Boom 2.
2. Xakamaynta Taageerayaasha Macs
KHATARSAN, koronto kale oo muhiim u ah Macs, ilaa iyo inta ay leeyihiin taageerayaal cad. Xilliga xagaaga waa marka kooxaheena ay dhibaatada ugu badan soo gaarto, gaar ahaan haddii aan si xoog leh u isticmaalno shaxdooda, cayaartoyda mararka qaarkood waxay ogaan doonaan waxa aan ula jeedo, waa in la furo ciyaar Mackeenuna wuxuu noqdaa mid kulul oo casaan ah (riwaayadaha), marar badan natiijooyinkan waa kuwo laga xumaado, isla sababtaa awgeed barnaamij taas xakamee heerkulka iyo nidaaminta nidaamka qaboojinta iyada oo ku xidhan waa lama huraan.
Iyada oo la adeegsanayo `` Macs Fan Control '' waxaad awood u yeelan doontaa inaad sameysid qodobbo ka mid ah adeegga ay dardargelin doonaan taageerayaasha qalabka si loo yareeyo heerkulka, dhibcahaani waxay ku saleysan yihiin aqrinta heerkulka ee dareemayaasha qaarkood Waxaan kugula talinayaa inaad sidan u sameyso:
Hadaad tahay isticmaaleyaasha siiya bakooradda ciyaaraha fiidiyowga, fiidiyowga iyo tafatirka sawirrada ama naqshadeynta garaafka ah, u dejiso kharashka GPU-ga oo ah jaan-goyn oo u samee marawaxadda inay dardar-geliso marka ay dhaafto 55ºC, taas oo aadeysa ugu badnaan haddii ay gaarto 70 ama 75ºC.
Haddii aad tahay, dhinaca kale, isticmaaleyaasha adeegsada codsiyada xafiiska, ku dul wareega internetka ama nooc kale oo koronto ah uma baahna GPU Waxaan kugula talineynaa inaad u dhisto CPU-gaaga tixraac ahaan, xudunta 1 si aad u noqoto mid sax ah, qaabkan markii CPU-gayagu soo galo Turbo Boost ama uu bilaabo inuu eego culeys badan oo uu kordhiyo heerkulkiisa si tartiib tartiib ah, Macs Fan Control ayaa ka taxadari doona inuu siiyo hawo wanaagsan qarax marka aad u baahato inta badan si aysan u xasilin ama u keenin dhibaatooyin xagga nidaamka ah.
Maxay muhiim u tahay in qalabkani? Heerkulka qaybahayagu waa qodob muhiim u ah waxqabadka iyo xasilloonida qalabkeenna, haddii jibilku gaadho heer kulka halista ah waxyeello u geysan kartaa qalabka qalabkeenna, haddii taa beddelkeed jab uu marwalba ku jiro heerkul sare tani waxay saameyn ku yeelan doontaa waxqabadka qalabkayaga oo isku dayi doona inuusan culeys badan saarin si ay hoos ugu dhigto heerkulkeeda, taasoo keeneysa waxqabad xumo iyo xitaa xasillooni darrada nidaamka marar badan.
¿Maxaan ugu talinayaa Xakamaynta Taageerayaasha Macs ku saabsan yutiilitida sida TG Pro ama SMC Control? Si aad u fudud, in lagu bilaabo waa adeeg bilaash ah, laakiin intaas oo dhan maahan, waxay cadeysay inay si fiican u shaqeyneyso isla markaana leedahay xiriir waxtar leh oo saaxiibtinimo leh, marka lagu daro inay heysato nooc loogu talagalay Windows-ka oo qofka isticmaala uu ku rakibi karo. labadaba OS X iyo Boot Camp isla korantada maamusha heerkulka oo sidaasna ku xaqiijineysa nolol dheer iyo waxqabad wanaagsan kombiyuutarkaaga, maxaa yeelay si daacadnimo ah, maaraynta qaboojinta Windows-ka ee Mac-da waa mid laga naxo, Boot Camp taageerayaashu uma muuqdaan inay daaranayaan ilaa ay qeybaha ka gaarayaan heerkulka sare, taasina ma aha oo kaliya dhibsasho laakiin sidoo kale waxay khatar ku tahay qalabka.
Horey ayaan ugahadlay utilitykan hada kahor, asaga waxaan ku abuuri karnaa saxanno kumbuyuutareed anagoo isticmaaleyna qeyb kamid ah xusuusta RAM-da, sida iska cad adeegsiga korantadan waa inaan hubinaa inaan heysano ugu yaraan 8 GB oo RAM ahHaddii kale waxaan ka saari doonnaa RAM horeyba uga maqnaa nidaamka.
Thanks to iRamDisk waan abuuri karnaa cutub loogu talagalay keydka Safari (waa ikhtiyaar barnaamijku laftiisu soo jeediyo oo qaab fudud ku fuliyo), tan waxaan kuheli doonnaa socod aad u dhaqso badan oo leh xawaare sare oo helitaanka kaydka la sheegay iyo waliba wax walwal ah kama qabno inaan tirtirno khasnaddan marwalba marba haddii RAM-ka la faaruqinayo mar kasta oo aan damino qalabkeena.
Faa'iido kale oo ka mid ah barnaamijkani waa awoodda samee cajalado aad ku kaydin karto barnaamij gaar ah, Codsigani wuxuu ku raaxeysan doonaa xawaare aad u sarreeya oo kuwa kale ka badan oo wuxuu noo oggolaan doonaa inaan si dhakhso leh ula shaqeyno, oo ku habboon tusaale ahaan inaan kaydinno maktabadaha Final Cut Pro, Mashaariicda Xcode ama sawirrada aan wax ka beddelayno.
KA DAAWO: Maskaxda ku hay taas sidii aan soo sheegay xusuustaani waa masaxi doontaa markaan lacag ka bixinno qalabkaHaddii aad wax muhiim ah ku keydin doontid cajaladahaan, calaamadee sanduuqa "Samee kayd" si marka nidaamka la daminaayo xogta loo soo guuriyo diskiga si aysan u lumin, waxaad sidoo kale calaamadin kartaa "Abuur bilowga ", sidan ayaa diskka loo abuuri doonaa markuu kombiyuutarku bilaabo mana ahan inaan ku celino howsha markasta oo aan doonayno inaan isticmaalno.
Adeegyadan waa mid aad u fudud, iyada oo ay ku mahadsantahay kabadhkayagu wuxuu yeelan doonaa taariikh cabbir la cayimay oo aan ku heli karno toobiye kumbuyuutar, oo ku habboon qorayaasha iyo dadka kale ee u baahan inay xogtan noocan ah si wanaagsan u abaabulaan, waxaan nuqul ka sameysan karnaa 100 ama wax ka badan isla waqtigaas oo marin u helno mar kasta oo aan dooneyno inaan dooranno macluumaadka aan dooneyno inaan dhejino, tan waxaa ka mid ah xiriiriyeyaal, qoraal, sawirro, feylal, wax kasta.
Wixii ugu faahfaahsan, codsigan waxaa ku jira xeerar kaas oo HA nuqulin xogta laga soo saaray codsiyada sida 1Password, LastPass ama iCloud KeychainSidan oo kale, qof kasta oo gala boodhkayagu ma arki doono haddii aan waligeen nuqul ka dhignay lambarro sir ah, waxaan ku dari karnaa goobaha ama codsiyada aan dooneyno liiska laga reebay.
5. Qarsoon 2
Hider 2 waxaan ku abuuri karnaa jir duug ah oo sir ah kaas oo ka koobnaan doona faylalkayaga shaqsiyadeed, sida dukumiintiyada qarsoodiga ah, sawirada, fiidyowyada, qaansheegadka ama waxkastoo kale, jirkaan ayaa lagu keydin doonaa saxankayaga si fiican loo ilaaliyo si aan qofna u heli karin waxyaabaha uu ka kooban yahay Codsiga Hider 2 iyo lambarka sirta ah ee aan horay u qeexnay, waxaan ku furi karnaa kuna xiri karnaa jirridda sida loo doono kumbuyuutarrada ama kaaliyaha kaas oo ku sii nagaan doona barta xaaladda oo aan ku dari karno qoraal ama faylal markasta oo aan dooneyno, ku habboon in laga ilaaliyo feylashayada shaqsiyadeed inta ugu badan indhaha fog.
CrossOver waan awoodnaa naga ilaali inaad rakibato mashiin dalwad leh Windows ama xitaa Boot Camp iyo socodsiiya barnaamijyada Windows ee la jaan qaada "asal ahaan", sida ciyaaraha fiidiyowga ama softiweerrada kale ee aan u baahnayn darawallada (maaddaama aynaan gaarin heerkaas aadka u daran markii la sameynayo dekedda), oo ku habboon in lagu ciyaaro ciyaar fiidiyoow ah oo keliya la heli karo Windows ama in lagu socodsiiyo utility-ka aan ku haysan OS X.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Waxqabadka ugu badan ee Mac: Hagaha saxda ah
RAID1 wuxuu labanlaabayaa xawaaraha akhriska, maadaama tan loo sameeyo si la mid ah RAID0. Labada saxanba way iskumid yihiin, markaa intaad akhrinaysid qayb kamid ah, waxaad aqrinaysaa qaybta kale ee feylasha ku jirta qeybta kale.
Hambalyo weyn post. La soo dajiyay disk sensei iyo boom 2 si loo tijaabiyo
Ku jawaab trako
Aad baad u mahadsan tahay, waa wax lagu farxo in lagu caawiyo, waan hubaa inaad jeclaan doonto labada codsi!
Waad ku mahadsantahay qoraalka, waa wax cajiib ah. Miyaad ii sheegi kartaa bakhaar lagu kalsoon yahay oo ku yaal Madrid halkaasoo ay ku sameeyaan wax ka beddelladan? Aad ayaad u mahadsantahay
Qoraal CAJIIB AH !!! Aad u dadaal badan, aad baad u mahadsan tahay maxaa yeelay hubaal waxaan ku dhaqmi doonaa qaar ka mid ah waxyaalahan.
SSD-ka oo aan ka fikirayey inaan qaato muddo dheer, sidee u aragtaa Corsair XT ee 240gb?
Waad ku mahadsantahay boostada. Waa wax cajiib ah. Ma ii sheegi kartaa bakhaar lagu kalsoonaan karo oo ku yaal Madrid halkaas oo ay ku sameyn doonaan xoogaa horumar ah oo aad noo soo jeediso? Aad ayaad u mahadsantahay
Waxaan ku darayaa su’aal kale. Sidee tahay bogga iyo qaybaha OWC? Ma inaad bixisaa kastamka markay yimaadaan? Hadday sidaas tahay, waa imisa? 21% VAT?
Mahadsanid Carlos, waad ku mahadsan tahay isreebreebkaaga, waa wax lagu farxo ^^ Waxaan kaaga jawaabayaa tan sidoo kale:
OWC iyo Corsair labaduba waxay leeyihiin alaab aad u tayo sareysa, kala duwanaanshuhu waxay ku jiraan waxyaabo khiyaano badan, tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad ku isticmaasho Boot Camp Mac-gaaga (cayaaraha si fiican ayey uga socdaan Windows) Corsair waa midka, wuxuu leeyahay qalab rasmi ah Windows iyo Xaqiiqdii waad heli doontaa waxqabad kafiican cayaarahaaga, haddii taa lidkeeda aad kaliya adeegsato OS X, tan ugu fiican waa OWC, waxay u heellan yihiin Mac tan iyo markii la aasaasay waana khubaro ku xeel dheer arrimaha, SSD-kooda waxay ku daraan dareemayaal badan waxayna leeyihiin nidaam dib u isticmaalida qaabka 'TRIM' ee markii tan aan si toos ah looga shaqeyn karin (KA DIGTOONOW, waxay kugula talinayaan inaad dhaqaajiso TRIM markasta oo ay suurtagal tahay El Capitan maadaama ay tahay mid dheeri ah oo kordhin doonta nolosha faa'iidada leh ee SSD¨), labaduba waxay helayaan xawaare isku mid ah waxayna ku jiraan xaddiga qiimaha la midka ah, doorashadu waxay kuxirantahay isticmaalka aad siinaysid.
Xagga kastamka, haddii aad wax ka iibsato websaydhka OWC (macsales) waxaa ku jira kharashyada kastamka, qof aad wada shaqeysid wuxuu iibsaday € 230 wuxuuna bixiyay taxes 85 canshuuro, hase yeeshe websaydhka waxaad ka heli doontaa qaybaha iyo xirmooyinka qiimaha ka wanaagsan kuwa kale ee loo qaybiyo. iibiya OWC, sababtaas awgeed waxaa ugufiican inaad xisaabiso naftaada haddii bixinta kastamku kugu kaco, waxaad marwalba kaheli kartaa alaabtooda Amazon.com ^^
John fiican, runta ayaa ah in boostada wax badan i caawisay. Si aad u wanaagsan ayaa loo sharaxay wax walba;).
Waxaan u isticmaali doonaa waxyaabo badan oo loogu talagalay isticmaalka caadiga ah iyo laga yaabee xoogaa sawirro iyo fiidiyowyo ah laakiin wax kale oo yar. Waxaan eegay OWC waxaan u maleynayaa inay fiicneyd in laga iibsado halkaas maxaa yeelay xitaa iyadoo caadooyinka ay ka jaban tahay, dhibaatada aan arkay waxay ahayd arrinta dammaanadda.
Dhamaadka markaan eegay wax badan, waxaan doortay inaan iibsado Samsung Evo 850 240gb. Waxaan ku iibsaday dhowr usbuuc ka hor € 95 oo ah kombuyuutar laptop ka weyn waxaanan arkay in ay si fiican u socoto oo lagu iibinayo € 80 sidaas ayaan ku helay.
Wax yar oo aan qarash gareeyay waxaan sidoo kale iibsaday kiiska si aan u beddelo qalabka CD-ga oo aan u dhigo HDd-ga asalka ah iyo akhristaha kiiska dibedda.
Ugu dambayntiina bisha soo socota waxaan sii ballaadhin doonaa xusuusta illaa 16GB waxaanan si fiican u diyaarin doonaa laptop-ka.
Waxaa laga yaabaa in diskiga adagi aanu ahayn doorashada ugu fiican laakiin waa kan ugu horeeya oo leh qiimaha qaaliga ah sidoo kale waxaan sameeyaa xusuusta iyo sanduuqa. Haddii hadhow aan shil galo ssd ka dib waxaan aadi doonaa owc ama corsair.
PS: Waxaan horeyba uheystay sdd waana wax cajiib ah, isbuucaan dhamaadka waqtiga ayaan bilaabayaa inaan badalo qeybta cd.
Haddii aadan ku iibsan qiimo ka weyn 150 euro, ha furin qarashka canshuuraha, waxaan ka soo iibsaday adabtarada 3.5 illaa 2.5 teknolojiyadda cusub iyo qalabka lagu furo iMac-kayga, waxa kaliya ee aan ka iibsaday Spain waxay ahayd Samsung SSD iyo a tera iyo waxaan ka saaray HDD-ga iMac-kayga tera, laakiin waxaan qorsheynayaa inaan Raid 0 dhigo oo SSD kale oo Tera ah aan dhigo qeybta weyn ee loo yaqaan 'super drive bay' oo ay kujiraan xogta OWC.
Warqad aad u fiican ... Waxaan iibsaday mac mini 2014 waxayna leedahay 8 gig oo wan ah ... Ma aanan ogeyn mana aysan ii sheegin markii aan iibsaday inaan la cusbooneysiin karin ... Waxaan saaray ssd dushiisa wuuna duula ... waa wax layaableh .... Ma waxaa jira xeelad lagu hagaajinayo isticmaalka xusuusta ama lagu wanaajinayo si aanan xusuusta dhakhso ugu dhicin?
Jawaab ku bixi Matias Gandolfo
Waxaad isticmaali kartaa Memory Optimizer ama barnaamij la mid ah oo kaa caawinaya inaad xoreyso xusuusta markay buuxdo, iyadoo taasi jirto, iyadoo 8GB aad haysato ku filan hawlgalka qumman ee funcionamiento
kuwa ku jira Capitan oo aan RAID halkan ku sameyn karin waa fiidiyow aan sameeyay si ay u soo ceshan karaan Yosemite Disk Utility halkaas oo haddii aad ikhtiyaar u leedahay RAID https://youtu.be/ThPnpLs3pyA
Juan, qoraalku waa fiican yahay, halkan ayaan ka degay oo waa maqaal aad u wanaagsan. Intee in le'eg caawinaad ah meel aad u yar. Weyn, waan sugi doonaa talooyinkaaga!
Jawaab Javier Escartin
Boosto aad u fiican, gaar ahaan codsiyada taageerayaasha ayaa hoos u dhigay heerkulka 5%, waa wax weyn, mahadsanid.
Qoraal aad u wanaagsan, in kastoo aanan ku raacsaneyn dhawaaqa bilowga ah ee "dhibsashada leh", marar badan ayay na ogeysiisaa in gaariga carruurta loo baahan yahay in dib loo dejiyo
Jawaab Ricardo Inda
Sida loo beddelo inta ogeysiisyada lagu muujinayo OS X El Capitan
Miiska Taabashada ee Dukaanka Apple si loo muujiyo kartida 3D Touch